Abukar Arman: Maxaa sababay in Soomaaliya ay mamnuucdo wakiilkii Qaramada Midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya? – Radio Daljir
Abukar Arman: Maxaa sababay in Soomaaliya ay mamnuucdo wakiilkii Qaramada Midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya?
Janaayo 13, 2019 3:31 b 0
Mamnuuca Soomaaliya ay Nicholas Haysom dalka ka mamnuucday waxa uu khasaaro mug leh u soo jiidi karaa Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS).
Asbuucii ugu horreeyey ee Sannadka Cusub, Soomaaliya waxa ay kamid ahayd waddamada farakutiriska ah ee wararka adduunka loogu hadal-hayn badnaa. Hadal-haynta Soomaaliya kuma aysan salaysneyn guusha haldoorkeeda Ilhaan Cumar oo labaatan sano kahor timid Mareykanka haddana loo doortay Xildhibaan Aqalka Hoose ee Mareykanka, laakiin waxa ay salka ku haysay Soomaaliya oo mamnuucday wakiilkii khaaska ahaa ee Qaramada Midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya oo shaqadaba joogay saddex bilood oo kaliya.
Eedda lala beegtay Wakiilka Khaaska ah ee Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay, Nicholas Haysom, waxa ay ahayd in uu si xaqdarro ah u faragaliyey qaranimada iyo siyaasadda gudaha ee Soomaaliya – waa sheegasho ay dad badan oo anigu aan ku jiro ay u arkeen mid lagu degdegay, waqtiguna uusan ku qumaneyn, oo haddana ay weheliso daah-xirnaan muujin doonta in arrinku uusan wax faa’iido ah u lahaan doonin Soomaaliya.
Bal aan isku dayno in aan rarka kala rogno.
Bishii Agoosto 2017, Dowladda Fadaraalka Soomaaliya (DFS) waxa ay shaacisay in uu soo fakaday Mukhtaar Roobow (loo yaqaan Abu Mansuur), afhayeenkii hore ahaana hoggaamiye xigaha ururka dagaalamayaasha Al-shabaab ee lala xiriiriyo Al-Qaacida. Shaacin warkaas kabacdi, dowladdu waxa ay Roobow diyaarad ku keentay Muqdisho, waxa uuna isla bartaas ku qabtay shir jaraa’id.
Roobow waxa uu dowladda uga mahadceliyey sida sharafta leh ee ay u qaabileen. Waxaa kale oo uu sheegay in ay Al-Shabaab kala tageen dhowr sano kahor, ayna isku khilaafeen dhanka fasiraadda sharciga. Nasiibdarro, Roobow ma uusan sharrixin waxa uu arrinkaas ula jeeday ama waxa ku dhaliyey in uu saas yeelo. Sidoo kale ma uusan muujin sida uu uga muragaysanyahay argagaxa uu sababay, mana uusan dalban cafis – asna wax su’aal ah lama weydiin.
Waqti yar kabacdina Roobow waxaa u biloowday olole ama kaambayn ay dowladdu maalgalisay oo si tilmaan-wanaag ah magaciisa u muujinaya. Inta uu ololahaas ku dhexjiray waxa uu Roobow la kulmay madax dhaqameedyo, dibloomaasiyiin caalamka oo uu ku jiro safiirka Dowladda Ingiriiska, iyo saraakiil dowladda iyo Xubno Baarlamaanka Soomaaliya.
Isla markiibana beesha caalamku waxa ay Roobow degdeg uga saartay liiska argagixisada fiirada gaarka ah loo leeyahay, taas oo muujisay iyo DFS iyo beesha caalamkuba ay hawsha ka simanyihiin, ayna raalli ka yihiin in Roobow loo arko tusaale xagjir-ka-saarka, kaas oo u oggolaanaya in uu ka qaybqaato doorashada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya (KGS).
Mukhtaar Roobow oo ka dhex ololeynaya beeshiisa waxa uu u duulay oo ka sii duulay Muqdisho, asaga oo wata baasaboor dibloomaasi Soomaaliyeed waxa uuna ka sii aaday Sacuudi Carabiya.
Tartanka Kursiga Sare
Dhanka beeshiisa oo ah beesha ugu ballaaran gobolka, Mukhtaar Roobow waxa uu ahaa nin caan ah oo kaligiis ku filan in uu kursiga ka qaado Shariif Xasan Aden oo ah siyaasi ku xeeldheer habka siyaasadda Soomaalida, laguna matali karo Machiavelli-ga Soomaaliya.
Saas oo xaal yahay, DFS oo is tustay in laga adkaaday Aden waxa ay labajibbaartay musharrixiinta ay wadato, waxa ayna Koonfur Galbeed keentay ciidamada fadaraalka aadka u tababaran ee ladagaallanka argagixisada.
Markii Shariif Xasan Aden uu arkay in DFS ay ka go’antahay in ay guushu gacanteeda gasho waxa uu iskaga haray loollankii, boorsadiina waa xirxirtay, asaga oo isla markiiba magaalada ka huleeley.
DFS waqtiba isma aysan seegin oo isla markiiba waxa ay leexatay 180 digree ayada oo tilmaan-wanaaggii Rooboow ee lagu ballamay ka kala jiirisay kuna tilmaantay in uu yahay argagixiso aan la aamini karin. Roobow waxaa la isku dayey in lagu khasbo in uusan loolamin, laakiin waa uu diiday. Waana meeshaas meesha la isku mari waayey oo ismaandhaafku ka biloowday.
Asbuuc kahor inta aan Roobow la soo xirin, waxaa la faafiyey warqad ka timid qaybo sirdoonka Reer Galbeedka, waxaana lagu dhex faafiyey hay’adaha rayidka ee beesha caalamka iyo inta iska-war-haysa. Si kooban, warqadda waxaa lagu sheegay in ciidamada dowladda ay la socdaan koox qaabilsan dilalka, laguna amray in ay Roobow soo khaarajiyaan. Maalinta hawlgalka waxaa lagu sheegay “12ka Diseenbar ama 13ka.”
13kii bishii Diseenbar dhammaan musharrixiinta Koonfur Galbeed waxaa lagu casumay dhismaha gegida diyaaradaha Baydhabo oo fadhi u ahayd guddiga doorashooyinka, dowladda iyo kooxo kale oo ajnabi ah. Waa halkaas meesha Roobow uu daminka ku dhacay. In kasta oo aan faahfaahin rasmi ah laga hayn waxa meeshaas ka dhacay, mid baa la hubaa: Roobow waxaa gacanta ku soo dhigay ciidamada Itoobiya oo sheeganaya in ay qayb ka yihiin ciidamada nabad-ilaalinta Midowga Afrika – waana sheegasho ay AMISOM beenisay.
Muddaharaad iyo Rabshadaha Baydhabo
Markii la ogaaday waxa socda isla markiiba waxaa Baydhabo ka biloowday muddaharaad iyo caro siyaasadeed oo salkeedu yaal Muqdishu iyo xildhibaanada Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ciidamada DFS oo kaashanaya ciidamada Itoobiya oo ku hubeysan taangiyo iyo gawaarida gaashaaman waxa ay kahortageen dibad-baxayaal si nabad leh ku muddaharaadaya oo dalbanaya in Roobow la siidaayo. Maalmo gudahood dibad-baxayaashii si naraxiis-darro ah baa looga takhalusay, waxaana 19kii Diseenbar lagu dhawaaqay madaxweyne cusub oo Koonfur Galbeed yeelatay, DFS ayana ay raalli ka tahay.
Hay’adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International waxa ay soo saartay war murtiyeed ay ku dalbanayso, kuna dhiirigalineyso in ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya ay “iska ilaaliyaan isticmaalka hubka halista ah oo ay kala hortagaan dibad-baxayaasha.”
Intaas kabacdi, Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNSOM) waxa uu warqad u diray DFS, warqaddaas oo muujineysa dhibka dhacay iyo welwelka ay qabaan ayadoo in ka badan 15 qof Baydhabo lagu dilay – ayna ku jiraan ilmo iyo Xildhibaan – iyo su’aalo ku saabsan Jananka taliyaha ka ah booliska gobolka.
Waxaa soo shaacbaxay muuqaal fiidiyo ah oo muujinaya Jananka oo ku hanjabaya in la toogan doono qof kasta oo isku daya in uu muddaharaado, warqadda UNSOM ayana waxa ay weydiisay caddayn sifada sharci ee saamaxaysa in la soo xiro Roobow loona diido in uu ka qaybgalo doorashada. Dowladda FDS oo u jawaabaysa Wakiilka Khaaska ah ee Xoghayaha Guud waxay ay guddoontay in wakiil khaaska Nicholas Haysom uu faraha la galay siyaasadda gudaha ee dalka, sidaas darteenda uu mamnuuc ka yahay Soomaaliya.
Falcelintaas DFS waxa ay ku heshay xoogaa ammaan ah waxa ayna baraha bulshada ka dhalisay dhimbilo muran oo socod-barad ah dhanka siyaasadda iyo dibloomaasiyadda. Waxa ayna welwel ku abuurtay mucaaradka iyo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah Dowladda Fadaraalka, sida Puntland, Jubaland iyo Galmudug oo ficilkan ugu danbeeyey ee DFS u arkay mid muujinaya cabsigelin si loo aamusiyo naqdin kasta oo ka dhan ah xukuumadda.
Falcelinta waxaa kale oo ku jeesjeesay dadka qaar kuwaas oo u arkay in ay tahay xeeled siyaasadeed maadaama UNSOM ay dabajoogto hawl waajibaadkeeda kamid ah ayna oggolaadeen dowladihii tan ka horreeyey.
Falcelintii Qaramada Midoobay ma ay noqon mid raagta waxa ayna soo baxday maalmo kabacdi. Afhayeenka Xoghayaha Guud oo u jawaabaya DFS waxa uu sheegay in shirkii Vienne ee sannadkii 1961 lagu muujiyey in astaanta “mamnuucida (persona non grata)” ee dowladda Soomaaliya ay isticmaashay aysan ahayn mid lala beegsan karo shaqaalaha Qaramada Midoobay. Intaas kaliya ma aha e afhayeenku waxa uu ku daray in “Xoghaya Guud Antonio Guterres uu kalsooni buuxda ku qabo Haysom uuna aad uga xunyahay go’aanka Soomaaliya.” Saas oo arrin tahayna Xoghaya Guud waxaa u qorsheysan in uu Soomaaliya u magacaabo wakiil cusub.
Laakiin natiijada ka soo noqotay go’aankii aan loo meel-dayin ee dowladda Soomaaliya waxa uu ahaa mid degdeg ah oo cawaaqib-xumo wata. Midowga Yurub iyo dowladda Ingiriisku waxa ay isla markiiba joojiyeen maaligalintii ciidamada booliska DFS. Maalmo yar kaddibna, Xoghayaha Difaaca Ingiriiska, Gavin Williamson, waxa uu ka degay Hargeysa – waxa uuna ahaa safarkii ugu horreeyey ee xubin ka tirsan Golaha Xukuumadda Ingiriisku abid ku tago Somaliland.
Xoghayuhu waxa uu la kulmay Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi, waxa ayna ka wada hadleen “arrimo mudan oo ka dhexeeya ayna kamid yihiin amniga iyo hormarinta dhaqaalaha iyo sidoo kale kahortagga argagixisada iyo doorka ciidamada Ingiriiska ee hagidda ciidamadda ilaalada xeebaha ee Somaliland.” Waxaa ayana xusid mudan in dowladda Ingiriisku ay tahay daneeyaha koowaad ee xafiiska UNSOM iyo xafiiska Wakiilka Khaaska ah ee Xoghaya Guud (SRSG), labadaas xafiis la’aantooda aysan shirkadda Soma Oil & Gas – ahna isticmaarka dhaqaale-boobka ee qarniga – aysan sii jiri karin.
Ammuuraha ka Danbeeya
Waa sir furan oo aan qarsoodi ahayn in DFS ay ku adkaysaneyso horseedkeeda ‘xukun baddal’ xukuumadaha dowlad goboleedyada oo dhan. Illaa iyo hadda waxa ay ku guulaysteen laba kamid ah shanta dowlad goboleed. Sabab?
Waa marka hore e, DFS ma ay rabto hoggaamiye kamid ah hoggaamiyayaasha Soomaaliya oo ku qabsada awooddeeda dowlo ee ay rabto in ay afar dakadood ku wareejiso dowladda Itoobiya.
Waa marka labaad e, bisha soo socota DFS waxaa ka go’an in ay shaaciso mashruuc ka daran kan dekedaha, oo ay xaraashto 206 ceel ama baloog oo shidaal (206 oil blocks) oo aan hadda gacan ugu jirin ayna rabto in aan lagula xisaabtamin, aan xudduudihii dowlad goboleedyada la sugin, sugid la’aantaasna ay tahay tan maanta keentay in dhiig daato, dagaalna u dhexeeyo Somaliland iyo Puntland.
Waa mar saddexaad e, xukuumadda oo og xiriirka sii xumaanaya ee dowlad goboleedyada, DFS waxaa ka go’an in ay samaysato dabadhilifyo daacad u ah oo dhabbaha u fala soonoqoshada xukuumadda sannadka 2020.
Sababta afraad baa ayana ah bishii Abriil ee sannadkii la soo dhaafay iyo dhacdadii aan marna la saadaalin ee dhacday. Abiy Axmed waxa uu noqday Raysal Wasaaraha Itoobiya. Abiy oo ah duuliyaha ‘isbaddalka Geeska Afrika’ kana soo jeeda laamaha sirdoonka, waa nin ay ka go’antahay in uu dhinac u riixo ama ka takhaluso dhammaan kuwii ka agdhawaa xukuumaddii hore ee Tigreega, kuwaas oo xubnahooda ayana ay ka go’antahay in ay dhabarjabiyaan xukuumadda Abiy Axmed.
Xisaabta uu Abiy Axmed isku dhufsaday waxa ay diiradda saartay dhammaan hoggaamiyayaasha dowlad goboleedyada (aan ka ahayn Hirshabelle oo hoggaanku siyaasadda ku cusubyahay) iyo sidoo kale Somaliland iyo Mukhtaar Roobow. RW Abiy Axmed waxa uu aqoon gooni ah u leeyahay dhammaan siyaasi isku-sheegga iska soo xaadiriya Addis Ababa si ay awaamiirta u fuliyaan, waxa uuna ogyahay cidda jeebka u ahayd Roobow iyo hawlgaladiisii aagga Bakool. Sidoo kale waxa uu ogyahay cidda leh cadaadiska in DFS ay soodhaweyso Roobow ayada oo aan wax su’aal ah laga keenin ama xataa aan laga dalban in uu hubka dhigo oo kala diro maleeshiyaadkiisa.
In Mukhtaar Roobow ahaa nin lagu danaystay oo la isticmaalay ama uu yahay cayaaryahan waa hawl u taal taariikhyahanku in ay la daalaadhacaan. Laakiin, waqtigan hadda ee Roobow yahay maxbuus siyaasadeed, DFS dilaa dadweyne kama aysan dhigin shahiid oo kaliya ee waxa ay sii fogeysay oo shisheeye ka dhigeen taageerayaashii Roobow ee ay isku beesha ahaayeen. Marka laga yimaado muuqaalka kaligitalisnimada ee go’aanka DFS, go’aankaas waxa uu abidan dhaawacay doorkii soo goosashada ee ragga Shabaabka, waxaana ka dhashay in diidmo go’aanka dowladda darti uu wasiir ka tirsan DFS iscaliso.
Haddii DFS ay dhab ka tahay in ay soo celiso qaranimadii Soomaaliya, ha la timaado istaraatajiyad dhammaystiran oo ay ku dheehantahay dib-u-heshiisiin Soomaaliyeed oo dhab ah oo Soomaali leedahay, xuddunta ha u jarto ku tiirsanaanta kaalmada shisheeye, dib ha u habeyso nidaamka amni ee shisheeyuhu maamusho oo ha la abuuro ciidan Soomaaliyeed oo leh talis iyo maamul fadaraal oo ilaalin kara xuduudaha dalka.
Tani waa mid rabta aragti fog iyo dhiiranaan si wixii lama huraan ah loogu huro, looguna dulqaato geed-socodka. Haddii aan la helin dib-u-heshiisiin dhab ah, DFS ma heli karto dowladnimo dhab ah. Dowladnimo dhab ah la’aanteedna qaranimada DFS ay raadinaysaa waa dhalanteed, waaba haddii raadintu aysan noqon mid qaranimada laftigeeda dhaawacda.
Maqaalka oo afka Igiriiska ku qoran hoos arag:
Siyaasadda & Dhaqaalaha 479 Wararka 20733